Vegan Burger - Adag, Grillable iyo Gebi ahaanba ilaahnimo! Vegan Burger - Adag, Grillable iyo Gebi ahaanba ilaahnimo! - Ordrs
Aad u fiican oo buuxsan, oo leh isku dar ah oo udgoon abuuraya dhadhanka cajiibka ah ee hilibka dubista.
Iskuday burgers-yadan qurxan:
COOK: 10 daqiiqo
ADEEGYADA: 4 Adeegyada
Loogu talagalay Baaskiiladaha Vegan
1 koob (100g) Ukun
1 koob (164g) Digaagood (qasacadaysan, sifiican u faaruq)
1 Tbsp Soy Suugo
2 Tbsp Tamaandhada ku dhaji
1 Tbsp Mayonnaise Vegan ah
1 tsp Suugada Hoisin
1/2 tsp Budada Toonta
1/2 tsp Budada Basasha
1 tsp cusbo
1/4 tsp Basbaaska Madaw ee Ground
1/2 tsp Cabitaanka Paprika
1/8 tsp Qiiqa dareeraha ah
1 koob (157g) Couscous (Karinta, Khariidad la dubay) *
1/2 koob (75g) Gluten Muhiim ah
2 Tbsp Suugada Hilibka Hilibka Loogu Sameeyo
Yaanyo la jarjaray
Pickles la jeexjeexay
Avokado la jarjaray
Basal Cas Cas
Dharka Vegan Thousand Island
Waxaad ku dartaa iniinta ku jirta mashiinka cuntada si aad u jajabiso. U wareeji baaquli isku qasan.
Ku dar digaagada mashiinka cuntada maraqa maraqa soyka iyo yaanyada. Habsocodsi ilaa inta si fiican loogu dhex qasmayo. Waxaa laga yaabaa inaad joojiso dhowr jeer si aad u xoqdo dhinacyada oo aad dib u bilowdo mar kale ka hor inta aysan billaabin inay isku dhex qasmaan U wareeji baaquli isku qasan leh iniinta la jajabiyey.
Kudar majones vegan, suugo sabiib ah, dijon mustard, budada toonta, budada basasha, milix, basbaaska madow, paprika la cabo iyo qiiqa dareeraha ah weelka la isku qaso.
Ku dar couscous-ka la kariyey iyo sarreenka muhiimka ah kuna walaaq illaa waxyar oo isku dar ah. Ka dib halkaas ku gal gacmahaaga oo u samee kubad weyn ka dibna u jilib qiyaastii 20-30 jeer si qamadiga gluten uu si fiican ugu hawlgeli karo. Uma baahnid inaad ka walwasho sarreenka qamadiga ah ee la badhxo oo keenaya inay noqdaan kuwo aad u adag maxaa yeelay ma jiraan waxyaabo badan oo sarreen ah oo la isticmaalay, sidaas darteed isku-xoqiddu ma aha walaac aad u badan halkan.
U qaybi afar qaybood ka dibna ama samee qayb kasta qaab burger ah oo gacmahaaga ah ama hoos ugu xoqo wareeji wareegsan si aad u sameysid qaab wanaagsan oo dufan leh.
Ku dar saliidda saytuunka digsiga qaboojiyaha ka dibna ku dar burjiyeyaasha, adigoo ku cadayaya maraqa maraq vegan dusha sare ee burgers. Waxaad shiishaa 5 daqiiqadood dab dhexdhexaad ah ka dibna ku wareeji iyaga oo cadayaya suugada dubitaanka dhinaca kale. Natiijooyinka ugu wanaagsan ha ka rogin tuugada wax ka badan tan, burgers waxay si fiican u qabtaan marka la rogrogo sida ugu yar ee suurtogalka ah, markaa hubi in digsiga uusan aheyn mid kulul oo ay gubtaan.
Haddii aad wax ku karinayso dabka ka dib hubi in saliidda si khafiif ah loo saliiday si burgersku aysan u dhegsan. Burushka burushka ku maydh maraqa hilibka barbecue ka dibna hal dhinac kari ilaa 5 daqiiqo ka dibna kan kale 5 daqiiqo. Waqtigu wuu ka duwanaan karaa kala duwanaanta dabka si aad sidoo kale ugu dheeli karto dhegta. Waxay diyaar u yihiin markay si fiican u bunni labada dhinac.
Ku darso rootida hamburger leh saladh, yaanyo la jarjaray, qajaar la cunay, avokado, basal casaan iyo lebbiska kun ee vegan.
* Couscous waa in lagu buuxiyaa koobka si aad u wanaagsan, 157g taas oo ah cabirka koobka caadiga ah ee koobka couscous la kariyey waa mid loogu tala galay koob aad u buuxan, markaa xir xir oo ku riix qaaddo kadib qaadasho kadibna waxbadan ku dar. .
* Haddii aad ku shiileyso burgers digsi ka dibna isticmaal 2 Tbsp oo saliid saytuun ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku sameyneyso qalabka wax lagu dubo markaa kaliya hubi in qalabka wax lagu dubo uu si khafiif ah u dufan yahay si uusan ugu dhejin doonin burgers-kaaga.
* Macluumaadka nafaqada waxaa loogu talagalay kaliya qaybaha burgerka (oo ay ku jiraan saliid saytuun ah oo la shiilinayo iyo sooska dubitaanka ee la dubay) waxayna ka reeban tahay waxa burgers-ka loogu adeego.
Jeclaan Vigaan, April 2019
"Sole meunière wuxuu iftiiminayaa dhadhanka fudud ee kalluunka darayga ah, subagga, liinta iyo dhir" Kalluumeysi Ingiriisi ah oo dhab ah ...
"Waxaa loogu magac daray gobol ka tirsan Normandy oo caan ku ah tufaaxdiisa (iyo Calvados), cuntadani dhaqameed waxay isku daraysaa labadaba taajir, ...
Kalluunka kalluunka oo wata Cheesy Mash
"Waxba kama garaacaan keega kalluunka kareemka leh qaar ka mid ah cuntada raaxada leh." Cuntadan ku-guuleysiga abaalmarinta ayaa kuu oggolaan doonta inaad ...
Ku noqo cuntada